Unoda Kuongorora DNS Kwako Uchishandisa Vabati pane OSX? | Martech Zone
Unoda Kuongorora DNS Kwako Uchishandisa Vabati pane OSX?
China, Kukadzi 21, 2019 Chishanu, February 22, 2019 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vangu akaendesa webhusaiti yavo kune yakawanda gamba account. Vakagadzirisa maratidziro avo eDomain echisimba eA neCNAME zvinyorwa asi vaive nenguva yakaoma yekuona kana saiti yacho yagadziriswa neiyo nyowani yekubata account (nyowani IP Kero).
Pane zvinhu zvishoma zvekuchengeta mupfungwa kana uchinetsa DNS. Kunzwisisa mashandiro eDNS, kunzwisisa mashandiro eDomain Registrar ako, uyezve kunzwisisa mashandiro anoita muenzi wako kupinda kwavo kwesizinda.
Mashandiro anoita DNS
Paunonyora dura kune browser:
Iyo domain inotariswa kumusoro muInternet zita server kutsvaga uko iko kunofanirwa kutumirwa chikumbiro.
Muchiitiko chewebhu dawidhi chikumbiro (http), zita zita rinodaro inodzorera iyo IP kero kune komputa yako.
Komputa yako inozochengeta izvi munharaunda, inozivikanwa seyako DNS Cache.
Chikumbiro chinotumirwa kumubati, inoendesa chikumbiro internally uye inopa yako saiti.
Maitiro Eko Domain Registrar Anoshanda
Tsamba pane izvi… havazi vese vanoita mabharani vanogonesa yako DNS. Ndine mumwe mutengi, semuenzaniso, ayo anonyora avo maseru kuburikidza neYahoo! Yahoo! hainyatso kubata iyo domain kunyangwe ichiratidzika saizvozvo mukutonga kwavo. Ivo vanongova mutengesi we Tucows. Nekuda kweizvozvo, kana iwe ukaita shanduko kune yako DNS marongero muYahoo!, Zvinogona kutora maawa shanduko idzodzo dzisati dzagadziriswa mu zvechokwadi domain registrar.
Kana ako marongero eDNS akagadziridzwa, iwo anozofambiswa pamusoro pemaseva mazhinji paInternet. Kazhinji yenguva, izvi chaizvo zvinongotora masekonzi mashoma kuti zviitike. Ichi ndicho chimwe chikonzero nei vanhu vachizobhadhara yakagadzirirwa DNS. Anogoneswa maDNS makambani anowanzove neese redundancy uye anokurumidza zvisingaite… kazhinji nekukurumidza kupfuura yako domain registrar.
Kana maseva eInternet akangovandudzwa, nguva inotevera system yako painokumbira iyo DNS chikumbiro, iyo IP kero iyo yako saiti inogarwa inodzoserwa. CHERECHEDZA: Ramba uchifunga kuti ndati nguva inotevera system yako painokumbira. Kana iwe wakambokumbira iyo domain, iyo Internet inogona kunge iri yemazuva ano asi yako yemuno system inogona kunge iri kugadzirisa yekare IP kero inoenderana neako DNS Cache.
Maitiro Eko Anogamuchira DNS Anoshanda
Iyo IP kero iyo inodzoserwa uye cached neyako yemuno system haina kujairika yakasarudzika kune imwechete webhusaiti. Anogashira anogona kuve nemazana kana kunyange mazana emawebhusaiti anotambirwa pane imwechete IP Kero (kazhinji server kana rakapotsa server). Saka, kana domain yako ikakumbirwa kubva kuI IP Kero, yako inomiririra inotungamira chikumbiro chako kune yakatarwa folda nzvimbo mukati me server uye inopa peji rako.
Maitiro Ekugadzirisa Matambudziko DNS
Nekuti pane matatu masisitimu pano, kune zvakare matatu masystem ekugadzirisa! Kutanga, iwe uchazoda kungotarisa yako yemuno system kuti uone iko iyo IP Kero iri kunongedzera kune yako system:
Izvi zvinoitwa zvirinyore nekuvhura Terminal hwindo uye typing:
Kana iwe unogona chaizvo kuita yakatarwa zita server kutarisa:
Kana iwe uchinge wagadzirisa iyo DNS marongero mune yako domain registrar, ipapo iwe uchazoda kuona yako DNS cache yajekeswa uye iwe uchazoda kuita chikumbiro zvakare. Kuchenesa yako DNS cache muOSX:
Unogona kuyedza iyo ping or nslookup kuti uone kana dura racho ragadzirisa kukero nyowani yeIP panguva ino.
Nhanho inotevera ichave yekuona kana maInternet DNS maseva akagadziridzwa. Chengeta DNSstuff zvinobatsira izvi, unogona kuwana yakazara DNSreport kuburikidza neplatifomu yavo izvo chaizvo chaizvo. Flywheel ine yakakura DNS Checker mupuratifomu yayo kwavanoenda kunyorera Google, OpenDNS, Fortalnet, uye Probe Networks kuti uone kana marongero ako akapararira zvakanaka kutenderera pawebhu.
Kana iwe uri kuona iyo IP kero inonyatsoratidzwa pawebhu uye saiti yako ichiri kusaratidzika, iwe unogona zvakare kupfuura maInternet maseva uye kuudza system yako kungotumira iyo chikumbiro yakananga kuI IP Kero. Unogona kuzadzikisa izvi nekuvandudza yako yefaira faira uye nekutsvaira yako DNS. Kuti uite izvi, vhura Terminal uye nyora:
sudo nano / etc / mauto
Pinda yako password password uye pinda pinda. Izvo zvinounza iyo faira zvakananga muTerminal yekugadzirisa. Fambisa chinongedzo chako uchishandisa miseve yako uye wedzera mutsara mutsva ne IP kero inoteverwa nezita rezita.
Kuchengeta iyo faira, tinya kuzvidzora-o pane yako keyboard wobva wadzoka kuzogamuchira iro zita rezita. Buda mupepeti nekudzvanya kuzvidzora-x, iyo inokudzosera iwe kumutsara wekuraira. Usakanganwa kuburitsa cache yako. Kana iyo saiti ikasauya zvakanaka, zvinogona kunge zviri dambudziko renzvimbo kune wako anokugamuchira uye iwe unofanirwa kutaura navo wovaudza.
Yekupedzisira noti… usakanganwe kudzorera yako yefaira faira kune yayo yekutanga vhezheni. Iwe haudi kusiya mukova mukati imomo iwe waunoda kuvandudza otomatiki!
Nekutevera nhanho idzi, ini ndakakwanisa kuongorora kuti angu maDNS akanyorwa murejistrari anga asvika parizvino, izvo zvinyoreso zveDNS paInternet zvaive zvenguva, yangu Mac's DNS cache yaive yazvino, uye iyo yewebhu inomiririra DNS yakanga yakwira kufambidzana… zvakanaka kuenda!
Maitiro Ekugadzirisa Yako Blog Yeinotevera Chinyorwa cheMaximum Impact.